बीमा मार्फत विपदपछि हुने नोक्सानीलाई कम गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्री डा. खतिवडा – Nepali Public
असोज ९, काठमाडौं। बीमा समिति र नेपाल बीमक सङ्घद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘वित्तीय सुदृढीकरण, विपद जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन र बीमा’ विषयक २१ औँ सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मोलनमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सहित विभिन्न देशका ५०० भन्दा बढी बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा बीमासँग सम्बन्धित नेतृत्व, मूल्याङ्कन, लघु बीमा लगायत क्षेत्रमा अलगअलग कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।
उक्त सम्मेलनमा मानव निर्मित विपद एवम् प्राकृतिक विपदपछि हुने क्षतिमा बीमाको जोखिमलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहभागीहरू बीच अनुभव आदानप्रदान हुनेछ ।
अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मेलन शुभारम्भका क्रममा समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको चर्चा गर्दै बीमामार्फत विपदपछि हुने आर्थिक नोक्सानीलाई कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने विचार राख्नुभयो ।
अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो, “यातायात, घरजग्गा व्यवसाय, उद्योगलगायत केही सीमित क्षेत्रमा रहेको बीमाको दायरालाई आगामी दिनमा बढाउँदै, अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।” उक्त समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले सबै क्षेत्रको बिमा समेट्ने गरी काम अघि बढेको र साइबर बीमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले विपद जोखिमलाई कम गर्दै वित्तीय सुदृढीकरण गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
Conference of inter coorporation
Dr. Yuvraj Khatiwada
Previous Article १० वर्ष पछि बन्यो तमोरमाथि मोटर चल्ने पुल
Next Article बैङ्क र अस्पतालको सहकार्यले सेवाग्राही लाभान्वित